Ciidamadda dowladda iyo alshabaab oo shabeelaha hoose ku dagaalamay – Radio Daljir
Febraayo 22, 2019 7:39 b 0
Dagaalkaas ayaa xalay saqdii dhexe waxa uu ka dhacay deegaanka golweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana uu u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ururka Al-Shabaab oo ku sugan deegaano ka tirsan Gobolkaas.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay xalay weerareen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose,waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo mudo saacado ah qaatay,sida ay risaala u sheegeen dadka deegaanka.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ah ayaa dagaalkaasi ka dhashay,hayeeshee waxaa weli si rasmi ah oo la shaacin khasaaraha kala gaaray labada dhinac maadaama ay aheyd xilli habeen ah badi dadka ay hooygooda ku wada xaroodeen.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Millateriga Soomaaliya ee Gobolka Shabeellaha Hoose oo aan la xiriirnay si aan dagaalkaas waxa uga weedyiino ayaa ka gaabsadeen,hayeeshee dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu ahaa mid culus.
Wararka ugu dambeeya ee saakay aan ka heleyno deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan,balse ciidamada dowladda Soomaaliya ay halkaasi ka wadaan dhaq dhaqaaqyo ciidan.
Burundi oo sheegtay inay Somaaliya kala baxayso ciidamadeeda